Hihaona amin'ny fampisehoana fampielezan-kevitr'ireo mpisera 3 an'ny mpampiasa | Martech Zone
Misy fomba am-polony hanatsarana ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra. Ny zava-drehetra manomboka amin'ny loko amin'ny bokotra fiantsoana ka hatramin'ny fanandramana sehatra vaovao dia afaka manome valiny tsara kokoa ho anao.
Saingy tsy midika izany fa tetika fanatsarana UA (User Acquisation) rehetra hitanao fa mendrika hatao.
Tena marina izany raha manana loharanom-bola voafetra ianao. Raha ao amin'ny ekipa kely ianao, na manana teritery amin'ny teti-bola na fotoana voafetra, ireo fetra ireo dia hanakana anao tsy hanandrana ny tetika fanatsarana rehetra ao amin'ilay boky.
Na dia maningana ianao ary manana ny loharano rehetra ilainao dia misy foana ny olana ifantohana.
Ny fifantohana dia mety ho entana faran'izay sarobidy indrindra amintsika. Ao anatin'ny tabataban'ny fitantanana fampielezan-kevitra isan'andro, ny fisafidianana ny zavatra tsara hifantohana dia mampisy ny tsy fitoviana. Tsy misy dikany ny fanakanana ny lisitry ny zavatra tokony hataonao amin'ny tetika fanatsarana izay tsy hitondra fahasamihafana lehibe.
Soa ihany, tsy sarotra ny mahita hoe iza amin'ireo faritra ifantohana no mendrika. Rehefa avy nitantana 3 tapitrisa dolara mahery amin'ny fandaniana doka izahay, dia hitanay izay tena mahasamihafa azy sy izay tsy. Ary ireo, tsy azo ihodivirana, no mpamily telo lehibe indrindra amin'ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra UA amin'izao fotoana izao:
Fanatsarana ny famoronana
Alaivo antso an-telefaona ireo zavatra telo ireo, ary ny tetika fanatsarana kely fanampiny rehetra tsy dia maninona. Raha vao miasa sy mifanaraka ny famoronana, ny fikendrena ary ny teti-bola, dia ho salama ny ROAS amin'ny fampielezan-kevitra ka tsy hanenjika ny teknika fanatsarana rehetra henonao momba ny fanatsarana zara raha tsikaritra.
Andao atomboka amin'ny mpanova lalao lehibe indrindra:
Ny fanatsarana ny famoronana dia ny fampiharana ny fomba mahomby indrindra hampisondrotana ny ROAS (Fandaniana amin'ny fandaniana amin'ny doka). Fe-potoana. Manorotoro paikady fanatsarana hafa izy io, ary raha ny marina dia hitantsika fa manome valiny tsara kokoa noho ny asa asa hafa any amin'ny departemanta hafa.
Saingy tsy miresaka momba ny fihazakazahana fitsapana kely fotsiny izahay. Mba hahomby, ny fanatsarana ny famoronana dia tokony ho stratejika, mahomby ary mitohy.
Namolavola fomba iray manodidina ny fanatsarana ny famoronana antsoina hoe Fitsapana ny famoronana. Ny fototr'izany dia:
Ampahany isan-jaton'ny doka noforoninao ihany no mahavita azy.
Matetika, 5% amin'ny doka fotsiny no tena naharesy ny fifehezana. Saingy izany no ilainao, sa tsy izany - tsy doka hafa fotsiny, fa doka mety hampandehanana ary hahazoana mihazakazaka. Ny elanelan'ny fampisehoana eo amin'ny mpandresy sy ny resy dia goavana, araka ny hitanao etsy ambany. Mampiseho ny fiovaovan'ny fandaniana doka amin'ny tabilao famoronana 600 isan-karazany ny tabilao, ary manokana ny fandaniana amin'ny fampisehoana izahay. Ampahany amin'ireo doka 600 fotsiny no tena nahavita.
Izahay dia mamolavola sy mizaha karazana famoronana roa: Hevitra sy fiovana isan-karazany.
Ny 80% nosedraina dia fiovana amin'ny doka mandresy. Manome antsika fandresena fanampiny izany raha mamela antsika hanena fatiantoka. Fa izahay koa dia mizaha hevitra - hevitra vaovao lehibe sy feno fahasahiana - 20% amin'ny fotoana. Matetika ny konsep dia tanky, fa indraindray izy ireo dia manao fampisehoana. Avy eo, indraindray, mahazo valiny misimisy izy ireo izay mamorona indray ny fomba famoronana mandritra ny volana maro. Ny haben'ny fandresena dia manamarina ny fatiantoka.
Tsy milalao ny fitsipi-pitsipika manan-danja momba ny statistika amin'ny fitsapana A / B izahay.
Amin'ny fitsapana mahazatra A / B dia mila ambaratonga fahatokisana 90-95% ianao hahazoana ny lanjan'ny statistika. Saingy (ary manakiana izany), ny fitsapana mahazatra dia mitady tombony kely, fanampiny, toy ny fiakarana 3% aza.
Tsy manandrana fiakarana 3% izahay. Izahay dia mitady fisondrotana 20% farafaharatsiny na tsara kokoa. Satria mitady fanatsarana lehibe izahay, ary noho ny fomba fiasan'ny statistika, afaka mihazakazaka fitsapana mandritra ny fotoana kely noho ny amin'ny fitiliana a / b nentin-drazana izahay.
Mamonjy vola aman-taonina maro ny mpanjifanay ary manampy antsika hahazo vokatra haingana kokoa. Io kosa dia ahafahantsika miverina haingana kokoa noho ireo mpifaninana amintsika. Azontsika atao ny manatsara ny famoronana amin'ny fotoana fohy kokoa ary amin'ny vola kely kokoa noho izay avelan'ny fitsapana nentim-paharazana, sekoly / a / b taloha.
Mangataka amin'ny mpanjifanay izahay mba hahay handanjalanja momba ny fitsipiky ny marika.
Mitsikera ny marika. Azontsika izany. Saingy indraindray ny fepetra takian'ny marika dia manakana ny fahombiazany. Izahay, mizaha toetra. Ny fitsapana ataonay izay mitarika ny fanarahan-dalàna amin'ny marika fanenjana dia tsy maharitra, ka vitsy dia vitsy ny olona mahita azy, ary noho izany dia kely ny fahasimbana amin'ny tsy fitovizan'ny marika. Izahay koa manao izay rehetra azo atao mba hanitsiana ny famoronana haingana araka izay tratra, ka mifanaraka amin'ny torolàlana marika na dia mbola mitahiry ny fahombiazany aza.
Ireo no hevi-dehibe amin'ny fomba fiasa ankehitriny momba ny fitsapana famoronana. Tsy mitsaha-mivoatra ny fomba fanaovanay - mizaha toetra sy manohitra ny fomba fanaovan-tsika izahay, sahala amin'ny famoronana tanterahinay. Raha mila fanazavana lalina kokoa momba ny fomba fampivelarana sy hizahanay doka 100x dia jereo ny lahatsoratra bilaoginay vao tsy ela. Famoronana Facebook: Ahoana ny fomba famokarana sy famoahana famoronana doka finday amin'ny ambaratonga, na ny taratasinay fotsy, Fampisehoana Drive Creative amin'ny doka amin'ny Facebook!
Maninona no tonga ny fotoana hieritreretana ny famoronana ho mpamily voalohany amin'ny fampisehoana fampielezan-kevitra
Ny fanononan-tena ho mpamorona ho fomba voalohany hanatsarana ny zava-bita dia tsy mahazatra ao UA sy ny dokambarotra nomerika, farafaharatsiny eo amin'ireo olona izay nanao azy io nandritra ny fotoana kelikely.
Nandritra ny taona maro, rehefa nampiasa ny teny fanatsarana ny mpitantana UA dia midika hoe fanovana ny fizarana tetibola sy ny kendrena ho an'ny mpihaino. Noho ny fetran'ny haitao niaretanay hatramin'ny vao tsy ela izay dia tsy nahazo haingana ny angon-drakitra fanatanterahana fampielezan-kevitra izahay mba hiasa amin'izany ary hanisy fiovana mandritra ny fampielezan-kevitra.
Tapitra ireo andro ireo. Ankehitriny, mahazo angona fampisehoana tena izy isika na saika tena izy avy amin'ny fampielezan-kevitra. Ary ny micron rehetra amin'ny fahombiazanao dia azonao esorina amin'ny resaka fampielezan-kevitra. Marina indrindra izany eo amin'ny tontolon'ny doka mifototra amin'ny finday, izay midika fa ny efijery kely kokoa dia tsy ampy ny toerana hanaovana doka efatra; tsy misy afa-tsy iray ihany.
Ka na eo aza ny fikendrena sy ny fanodikodinana teti-bola dia fomba mahery hanatsarana ny fahombiazana (ary mila hampiasaina amin'ny fanandramana famoronana ianao), fantatray fa ny fitsapana ny famoronana dia mamono ny pataloha amin'izy roa tonta.
Amin'ny salan'isa, ny fametrahana ireo haino aman-jery dia mitentina 30% eo ho eo amin'ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra marika raha 70% kosa ny famoronana.
Mieritrereta amin'ny Google
Saingy tsy izany ihany no antony ifantohana amin'ny laser amin'ny fanatsarana ny famoronana. Angamba, ny antony tsara indrindra hifantohana amin'ny famoronana dia satria lasa miha mandeha ho azy ny tongotra roa hafa amin'ny fivorian'ny UA - ny tetibola sy ny kendrena. Ny algorithman ao amin'ny Google Ads sy Facebook dia naka ny ankamaroan'ny asa fanaon'ny mpitantana UA isan'andro.
Misy vokany mahery vaika io, ao anatin'izany ny fampiakarana ny kianja filalaovana betsaka. Ka na iza na iza mpitantana UA izay nahazo tombony noho ny teknolojia dokambarotra avy amin'ny antoko fahatelo dia tsy nahomby izany tamin'ny ankapobeny. Afaka mampiasa fitaovana mitovy amin'izany ireo mpifaninana aminy ankehitriny.
Midika izany fa fifaninanana bebe kokoa, fa ny tena zava-dehibe, midika izany fa miroso mankany amin'ny tontolo iray isika izay ny famoronana ihany no tena tombony azo amin'ny fifaninanana.
Izay rehetra nilaza fa mbola misy fandresena lehibe azo tanterahina amin'ny alàlan'ny tanjona sy teti-bola tsaratsara kokoa. Mety tsy manana ny mety ho fiantraikany mitovy amin'ny famoronana izy ireo, saingy voatery alefa an-telefaona izy ireo raha tsy hanao toa izany ny famoronana anao.
Raha vantany vao hitanao ny olona mety hanaovana dokam-barotra, ary ny antsasaky ny fandresena dia azo. Ary noho ny fitaovana mahafinaritra toa ny mpijery toa azy (misy ankehitriny amin'ny Facebook sy Google), afaka manao fizarana mihaino be dia be izahay. Azontsika atao ny mamoaka ny mpihaino amin'ny:
"Stacking" na fampifangaroana ireo mpijery toa azy
Manokana ny firenena
Ireo mpijery "Nesting", izay ahazoantsika mpihaino 2%, hamantatra ireo mpikambana 1% ao anatiny, avy eo esorinay ny 1% er dia ajanona ho mpijery 2% madio isika
Ireo karazana mpijery kendrena faran'izay kendrena ireo dia ahafahantsika manatsara ny fahombiazan'ny ambaratonga hafa izay tsy vitan'ny mpanao dokam-barotra hafa, fa mamela antsika ihany koa izany sorohy ny havizanan'ny mpanatrika lava kokoa noho izay azontsika atao raha tsy izany. Fitaovana tena ilaina amin'ny fampisehoana ambony indrindra izy io.
Izahay dia manao fizarana be loatra amin'ny mpihaino sy mikendry izay hanamboarana fitaovana hanamorana azy. Audien Builder Express ahafahantsika mamorona mpijery toa an-jatony miaraka amina tanjona goavambe tsy misy dikany ao anatin'ny segondra. Izy io koa dia ahafahantsika manova ny sandan'ny mpijery sasantsasany fotsiny mba hahafahan'ny Facebook mikendry bebe kokoa ireo vinavina avo lenta avo lenta.
Na dia manampy amin'ny fahombiazana aza ity fikendrena mpihaino mahery setra ity dia manana tombony iray hafa izy io: mamela antsika hihazona ny famoronana ho velona sy hanao fahombiazana lavitra kokoa noho ny tsy fananantsika tanjona kendrena. Arakaraka ny ahafahantsika mihazona velona hatrany ny famoronana sy ny fanaovana tsara, no vao mainka tsara kokoa.
Lavitra be izahay tamin'ny fanitsiana tolo-bidin'ny doka na ny haavon'ny teny lakile. miaraka fanatsarana ny tetibola, Fampandrenesana AEO, tolo-bidim-bidim-bidy ary fitaovana hafa, azontsika atao izao ny milaza ny algorithm izay karazana fiovam-po tadiavintsika, ary hoentin'izy ireo ho antsika izany.
Mbola misy ny kanto amin'ny teti-bola. Per Rafitra Facebook ho an'ny mizana fomba fanao tsara indrindra, na dia mila miala amin'ny fanaraha-maso akaiky ny teti-bolany aza ny mpitantana UA, manana ambaratonga iray amin'ny ambiny sisa izy ireo. Izany dia ny fanovana ny dingana amin'ny tsingerin'ny fividianana tadiavin'izy ireo.
Ka raha hoy izy ireo, ny mpitantana iray UA dia mila mahazo fiovam-po bebe kokoa mba hahafahan'ny algorithm Facebook mahomby kokoa, afaka manao izany izy ireo afindra ilay hetsika izay nohamarinin'izy ireo manakaiky ny tampon'ny fantsona - ny fametrahana ny app ohatra. Avy eo, rehefa miangona ny angon-drakitra ary manana fiovam-po ampy izy ireo mangataka hetsika manokana sy tsy dia matetika loatra (toy ny fividianana ao amin'ny app), dia afaka manova ny tanjon'ny hetsika fanovana ho zavatra sarobidy kokoa izy ireo.
Mbola mitohy ny teti-bola, amin'ny heviny hoe mitantana fandaniana izy, fa kosa mitantana fandaniana amin'ny ambaratonga stratejika. fa ankehitriny fa ny algorithman dia mihazakazaka be amin'ity lafiny fitantanana UA ity, isika olombelona sisa no mamantatra paikady fa tsy ny tolotra tsirairay.
UA Performance dia seza misy tongotra telo
Ny tsirairay amin'ireto mpamily voalohany ireto dia manakiana ny fampisehoana fampielezan-kevitra, saingy raha tsy rehefa ampiasainao amin'ny fampisehoana izy ireo vao tena manomboka miharo ROAS. Izy rehetra dia ampahany amin'ny ohabolana telo ranjo. Aza raharahiana ny iray, ary tampoka tsy hanohana anao ny roa hafa.
Ity dia ampahany lehibe amin'ny kanton'ny fitantanana fampielezan-kevitra amin'izao fotoana izao - miaraka amin'ny famoronana, famitana tanjona ary fanaovana teti-bola amin'ny fomba marina. Ny fampiharana marina an'io dia miovaova arakaraka ny indostria mankany amin'ny indostria, ny mpanjifa mankany amin'ny mpanjifa ary na dia isan-kerinandro aza. Saingy izany ny fanambin'ny fitantanana fahazoana mpampiasa lehibe ankehitriny. Ho an'ny sasany amintsika, mahafinaritra be izany.
Tags: algorithm amin'ny dokaFampandrenesana AEOtetibola fampielezan-kevitrafahombiazan'ny fampielezan-kevitratanjona kendrenafacebook adsfanandramana famoronana isafampisehoana fampielezan-kevitrafahazoan'ny mpampiasafamoronana famoronana mpampiasa